के अरुको सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्नुहुन्छ ? (सौन्दर्य) | Yopoho Directory
के अरुको सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्नुहुन्छ ? (सौन्दर्य)
एउटै सौन्दर्य प्रसाधन धेरै जनाले प्रयोग गर्दा स्कीन सम्बन्धी समस्या देखा पर्न सक्छ । केही सौन्दर्य प्रसाधन सेयर गर्दा निकै हानिकारक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले जानी राखौ सौन्दर्य प्रसाधन किन सेयर गर्नु हुँदैन ।
लोशनको जारः कुनै लोशनको जारमा जति पटक औला डुबाइन्छ, त्यति नै पटक त्यहाँ किटाणु पुग्ने सम्भावना बढेर जान्छ । यो सम्भावना त्यस बेला झन् बढेर जान्छ, जब अरु कसैले पनि त्यहाँ औला डुबाउँछन् । त्यसैले आफूलाई मन पर्ने क्रिम वा लोशनलाई ब्याक्टेरियाबाट बचाउनका लागि अरुलाई प्रयोग गर्न नदिनुहोस् साथै ठुलो बट्टाको सट्टा सानो बट्टा प्रयोग गर्नुहोस् । सेयर गर्नै पर्ने भयो भने पनि आफैले निकालेर दिनुहोस् ।
लिप ग्लसः कहिले काँही आवश्यकता परको बेला अरु कसैको लिप ग्लस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अब नगर्नुहोस् । कुनै पनि वस्तु जसले सिधै ओठलाई छुन्छ, त्यसबाट संक्रमण फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ । यदि कसैलाई मुखको वा घाँटीको संक्रमण छ भने त्यो प्रयोग नगर्नु नै बेस हुन्छ ।
मस्काराः परेलामा ब्याक्टेरियाको बास हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । त्यहाँबाट ब्याक्टेरिया मस्काराको ब्रशमा पुग्छ । यस्तो मस्काराको ब्रश प्रयोग गर्दा आँखाको समस्या हुन सक्छ जस्तै आँखा रातो हुनु, आँखा दुख्नु, सुन्निनु आदि । त्यसैले आफ्नो मस्कारा अरु कसैलाई प्रयोग गर्न नदिनुहोस् साथै अरुको पनि प्रयोग नगर्नुहोस् ।
मेकअप स्पन्जः मेकअप स्पन्ज पनि कसै सँग सेयर गर्नु हुँदैन । यसको सानो सानो छिद्र भएको डिजाइनका कारण यसमा सजिलै यीस्ट र ब्याक्टेरिया जम्मा हुन्छ । यसले गर्दा फंगल इन्फेक्सन, डण्डीफोर र स्कीन सम्बन्धी समस्याहरु देखा पर्छ । विशेष गरी भिजेको स्पन्ज प्रयोग गर्नुहुँदैन । स्पन्जलाई हरेक हप्ता तातो पानीमा स्याम्पु मिसाएर धुनु पर्छ ।
ट्वीजरः अरु कसैले प्रयोग गरेको ट्वीजर पनि आईब्रो निकाल्न प्रयोग गर्नु हानिकारक हुन्छ । यसबाट पनि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन सक्छ किनकि प्रायः ट्वीजरले आईब्रो उखेल्दा रगत पनि निस्किन सक्छ । त्यही ट्वीजर अरुले प्रयोग गर्दा सजिलै संक्रमण फैलिन्छ ।
काइयोः धेरै व्यक्तिहरु अरुको काइयोले कपाल कोर्दैनन् । जुन सुकै उमेरको व्यक्ति भए पनि अरुको काइयोले कपाल कोर्नु हानिकारक हुन्छ । अरुको काइयोले कपाल कोर्दा चायाँ साथै टाउकोको छालामा इन्फेक्सन हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो बेग्लै काइयो प्रयोग गर्नुपर्छ र हरेक हप्ता काइयो सफा गर्नुपर्छ ।
साबुनः साबुन हामी सरसफाईका लागि नै प्रयोग गर्छौ तर यो पनि एउटै धेरै जनाले चलाउनु हुँदैन । यदि संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको साबुन स्वस्थ व्यक्तिले प्रयोग गर्छ भने उसलाई पनि प्रभावित बनाउछ । एउटै टावेल पनि धेरै जनाले प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
Previous: डर हटाई प्रेरणामा वृद्धि गर्नुहोस्
Next: सुनको शुद्धता जाँच्ने उपाय (आर्थिक)